လုံခြုံသော ဘဝအတွက် စွန့်စားမှု နှင့် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်မှ အန္တရာယ်များ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
လုံခြုံသော ဘဝအတွက် စွန့်စားမှု နှင့် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်မှ အန္တရာယ်များ
အသက်အန္တရာယ်များလှတဲ့ ပင်လယ်ပြင်ခရိးစဉ်ကို သက်စွန့် ထွက်ပြေးသူများတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခတွင် အကြမ်းဖက်ခံရသည့် ဒုက္ခသည်အများစုပါဝင်ပေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ဒေသတွင်မကြာမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူမျိုးရေး တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် နေအိမ်များကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရသူများသည် မှောင်ခိုစက်လှေများပေါ်တွင် အန္တရာယ် များကို ရင်ဆိုင်နေရလျက်ရှိ ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးမှ ပြီးခဲ့သော သောကြာနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ နှစ်သစ်ကူးပြီးနောက် ရက်သတ္တ တစ်ပတ်အကြာတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အစီရင်ခံစာအရ ရခိုင်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့မှ ထွက်ပြေးလာကြသော ဒုက္ခသည်များ အရေအတွက်မှာ နှစ်ထောင်ခန့်အထိ ရှိနေပြီး မှောင်ခို စက်လှေများပေါ်တွင် နေထိုင်နေကြရကြောင်း သိရသည်။ သူတို့၏ ဦးတည်ရာမှာ အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံ တစ်ခုခုသို့ ဦးတည်ပုံရသော်လည်း ရေရေရာရာ မပြောနိုင်ပေ။
ယခုထွက်လာသော နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအရ ပင်လယ်ပြင်သို့ စွန့်စား တိမ်းရှောင်လာသူ ဦးရေမှာ မူလက ခန့်မှန်းထားသည့် ၁၃၀၀၀ ထက် ပိုနေပေသည်။ ထိုသူများထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ဒေသတွင် နေထိုင်ကြသော မွတ်စလင်မ်များ နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင် နေထိုင်သော ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်မ်များ ပါဝင်သည်။ ထိုသို့ ရှောင်တိမ်းလာသူများတွင် အများစုမှာ အမျိုးသားများ ဖြစ်ကြသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများပါ ပါဝင်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပြီးခဲ့သောနှစ်အတွင်းက ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်ထဲတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော စက်လှေတိမ်းမှောက် နစ်မြုပ်မှုတွင် သေဆုံးသူ အနည်းဆုံး ၄၈၅ဦးရှိပြီး ပျောက်ဆုံးနေသူ ၄ဦးရှိကြောင်းသိရသည်။ စာရင်းတွင်မပါဝင်ပဲ သေဆုံး(ပျောက်ဆုံး)နေသူများ မှာ ထိုထက်ပိုနိုင်သည်။
အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းများအရ ပင်လယ်ပြင်တွင်စက်လှေဖြင့် ထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားကြသူများအား ထိုင်းနှင့် မလေးရှားနယ်စပ်ရှိ လူမှောင်ခိုဂိုဏ်းများက ထိန်းချုပ် ထားကြောင်းသိရသည်။ ထွက်ပြေးသူများကို ဖမ်းထားပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိ ဆွေမျိုးများထံ ဆက်သွယ်စေကာ ကျန်ခရီးစဉ်အတွက် ငွေတောင်းကြောင်း ငွေမကြေမချင်း ဖမ်းဆီးခံရကြောင်းသိရသည်။ ငွေမပေးနိုင်သူများကို ငါးဖမ်းစက်လှေများ တွင် အလုပ်လုပ်ရန် ရောင်းစားခံရကြောင်း သိရသည်။
သွားလိုသော ခရီးဆုံးသို့ ဒုက္ခသည် မည်မျှရောက်ရှိသွားသည်ကို မသိနိုင်ပေ။ သူတို့အား အချိန်မရွေးဖမ်းမိ သွားနိုင်ပြီး မြန်မာပြည်သို့ အတင်းအကြပ်ပြန်ပို့ ခံရနိုင်သည်။ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးသည် ထိုသို့ အာဏာပိုင်များ၏ ဖမ်းဆီးမှုကိုခံရပြီး ပြန်ပို့ခံရသူများအားတွေ့ခွင့် ရရေးအတွက် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
“မြန်မာပြည်ကနေ ထိုင်းကို ခိုးဝင်လာတဲ့ သူတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ရဖို့ ကျွန်တော်တို့ ထိုင်းအစိုးရကို မေတ္တာရပ်ခံ ထားပါတယ်..။ သူတို့ဆီက အဖြေကိုစောင့်နေပါတယ်..။ မလေးရှားမှာလည်း ကျွန်တော်တို့က စနစ်တကျတောင်းဆိုပါတယ်..။ အစိုးရကလည်း ရောက်လာတဲ့ လှေတွေဆီကို သွားရောက်ခွင့်ပေးပါတယ်..။ တကယ်လို့ အဲဒီလိုရောက်လာသူတွေဟာ UNHCR ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင် သူတို့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ အခြေအနေကနေ လွတ်မြောက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်..။” ဟုပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူကပြောသည်။
ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးအနေနှင့် စိုးရိမ်သည့်အချက်မှာ ပြီးခဲ့သောနှစ် ဇွန်လမှ အောက်တိုဘာလအတွင်း ရခိုင်ဒေသတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူမျိုးစုတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ထွက်ပြေးလာကြသူ များသည် အန္တရာယ်များလှသော ပင်လယ်ခရီးကိုအသုံးပြု၍ တိမ်းရှောင် ကြခြင်းများ ပိုမိုများပြားလာမည် ကိုဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်းတွင် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ရသူပေါင်းမှာ ၁၁၅၀၀၀ ခန့်ရှိနေကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာ၏အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံဖြစ်သော ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင်လည်း ၁၉၉၀ ခုနှစ်များဆီကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးသွားသော ဒုက္ခသည်များမှာ မျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာ ရှိနေကြဆဲဖြစ်သည်။ တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားသော ဒုက္ခသည်စခန်းနှစ်ခုတွင် ဒုက္ခသည်ပေါင်း သုံးသောင်းခန့်ရှိနေပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ထွက်ပြေးလာပြီး ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် မနေပဲ ဒေသခံများနှင့်ရောနှော နေထိုင်နေကြသူများလည်းရှိသည်။
“ဒီလိုလှေတွေနဲ့ သွားလာနေထိုင်နေကြတဲ့ လူတွေရဲ့ အကြပ်အတည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေသတွင်းမှာ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ တောင်းဆိုနေပါတယ်..။ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ရှာဖွေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ထဲထဲဝင်ဝင် ပတ်သက်ဖို့ လည်း ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးက တိုက်တွန်းထားပါတယ်..။”
“စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှု နှေးကွေးတာနဲ့ အတူ ဆင်းရဲတွင်းပိုနက်လာပါတယ်..။ လူဦးရေအလိုက် အခွင့်အရေးတွေကို ထိန်ုးသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးမှု နည်းတာကလည်း အကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်..။ ပြီးတော့ ရခိုင်ဒေသတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ လူမျိုးစုတိုင်းရဲ့ စီးပွားရေးအပြန်အလှန် မှီခိုထိန်းကြောင်းမှု တွေကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်..။”
တစ်ချိန်တည်းတွင် ဒေသတွင်းရှိနိုင်ငံများအား မိမိတို့၏ ပွင့်နေသော နယ်ခြားများအား ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရန်နှင့် ၀င်ရောက်လာကြသော ဒုက္ခသည်များအား လူသားဆန်စွာ ဆက်ဆံကြပါရန် UNHCR က တိုက်တွန်းထားသည်။ ထို့ပြင်အဆိုပါဒုက္ခသည်များအနက်မှ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် တောင်းခံသော သူများအား ကူညီနိုင်ရေးအတွက် UNHCR အားဝင်ရောက်ခွင့်ပေးရန် လည်း တောင်းဆိုထားသည်။
ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးသည် ကုန်သွယ်ရေကြောင်း သင်္ဘောကပ္ပတိန်များအားလည်း ပင်လယ်ပြင်တွင်တွေ့နိုင်သော ရေမျော ဒုက္ခသည်များအား စောင့်ရှောက် ကယ်တင်ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ ထားသည်။
မတ်လတွင် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးမှ ပူးတွဲတာဝန်ယူကျင်းပမည့် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုရှိသည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် အာရှပစိဖ်ိတ်ဒေသတွင်းရှိ နိုင်ငံများအနေနှင့် မိမိတို့ ရေပိုင်နက်အတွင်း ပုံမှန်မဟုတ်သော လှုပ်ရှားမှုများတွေ့ရပါက မည်သို့ကိုင်တွယ်ကြမည် ဆိုသည်ကို ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြရန် ဖြစ်သည်။ အစိုးရများ၊အခြားသက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအစည်းဝေး မှ နိုင်ငံတကာ ရေပြင်တွင် တွေ့ရှိဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ပုံမမှန် လှုပ်ရှားမှုများကို ကိုင်တွယ် ထိန်းချုပ်ဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ဖေါ်ထုတ်နိုင်ရန် လမ်းစများ တွေ့လာနိုင်မည်ဟု ယူဆရသည်။
Source © UNHCR Myanmar
လွတ်လပ်ရေး (၁၉၅၇ ခုနှစ် ၉ ကြိမ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ ကမ္ဘာအလင်းရဲ့ အာဘော် ) (Jan 4, 2013)
ရခိုင် စုံစမ်းရေးအဖွဲ့မှာ အဖွဲ့ဝင်ဘယ်နှစ်ဦးလဲ ? (၂၇)ဦးလား ? (၂၅)ဦးလား ? (Jan 4, 2013)
အမေ့ခံလို့ မရတဲ့ မြန်မာမွတ်ဆလင်တို့၏ ပုံရိပ်များ (Jan 4, 2013)
X2O ဗုံးပေါက်မှု မတရားစွပ်စွဲ အပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရသူ ကိုဖြိုးဝေအောင် ကွယ်လွန် (Jan 4, 2013)
လှေစီးပြေးရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေ ထိုင်း အစိုးရ နေရပ်ရင်း ပြန်ပို့မည် (Jan 3, 2013)
အစိုးရက ဖိတ်ခေါ်ပါက ရခိုင်အရေး ကူညီပေးမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးသို့ပြောကြား (Dec 26, 2012)
The Hidden Genocide မြန်မာစာတန်းထိုး (Dec 18, 2012)
Genocide အသုံးအနှုန်းကို ကမ္ဘာ့ရှေ့နေများနှင့် တိုင်ပင်ပြီးမှ သုံးခဲ့တာဟု Hidden Genocide ရိုက်ကူးခဲ့သူ Mr.Phil Rees ပြော (Dec 10, 2012)
မြန်မာပြည်က လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှုများအပေါ် ကမ္ဘာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ခေါင်းဆောင်များရဲ့ တုံ့ပြန်မှု့ (Dec 8, 2012)
This entry was posted on January 18, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ကုရ်အာန်ကျမ်းမှ မုက္ခပတ်တော် တစ်ခုအား ဟားဗတ် တက္ကသိုလ် ဥပဒေဌာန အ၀င်တွင် ချိတ်ဆွဲထား
ကချင်ပြည်အတွင်း ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော စစ်ပွဲများ ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းရန် အရေးကြီးအဆိုအား ပြည်သူ့လွှတ်တော် အတည်ပြု →